कति लापरवाही ? छ महीनादेखि देशमा टिटी खोपको अभाव Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 09:51:59
जापानी समय : 01:06:59
Tag: कति लापरवाही ? छ महीनादेखि देशमा टिटी खोपको अभाव
कति लापरवाही ? छ महीनादेखि देशमा टिटी खोपको अभाव
Posted on November 12, 2018 November 12, 2018 by Yadav Devkota
दुर्घटना, फलाम या खिया लागेको सामानले चोट पुर्याउँदा तथा जनावरले टोकेमा टिटानस ब्याक्टेरिया मार्न २४ घण्टाभित्रै लगाउनुपर्ने टिटानसविरुद्धको भ्याक्सिन हाल देशभरि नै अभाव भएको छ ।
काठमाडाँैका विभिन्न औषधि पसलमा पुग्दा केही पसलमा पुरानो मौज्दात भ्याक्सिन भए पनि अधिकांश औषधि पसल तथा फार्मेसीमा भ्याक्सिन थिएन । काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर, थापाथली, मैतीदेवी, पुतलीसडकका सात औषधि पसलमा पुग्दा पाँच पसलमा खोप नआएको महीनौँ भएको पाइयो ।
तिहारअघि नर्भिक अस्पतालमा भ्याक्सिन नआएको महीना नाघेको थियो । देशका अन्य जिल्लामा समेत समस्या कायमै छ । काठमाडौँ पोलिक्लिनिक थापाथलीका सञ्चालक पङ्कज मेहता टिटी जस्तो महत्वपूर्ण भ्याक्सिन नहुनु दुर्भाग्य हो भन्नुहुन्छ । लामो समयदेखि थोक बजारमै भ्याक्सिन नभएको मेहताले बताउनुभयो । निम्स फार्मेसी, थापाथलीका राजु श्रेष्ठ तीन महीनादेखि भ्याक्सिन सकिएको बताउनुहुन्छ ।
“अभाव भएको छ महीना भयो, हामीलाई खबर आएको भने एक महीना भयो, त्यसपछि हामीले अहिले छिटो आयात गर्न पहल गरिरहेका छौँ ।” विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी भन्नुहुन्छ, “विभागले बजारमा औषधि र औषधिजन्य पदार्थको नियमन गर्ने काम गर्दछ । उहाँका अनुसार केही अत्यावश्यक भनिएका ठाउँमा आएको भ्याक्सिन पठाउने गरिएको छ ।” बजारमा भ्याक्सिन अभाव भएको छ महीना हुँदासमेत स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी भने बजारमा भ्याक्सिन अभाव भएको भन्नेबारेमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ।
मेडी सेल्सका प्रोप्राइटर श्रीबिन्दु राजभण्डारी भारतको कम्पनी पुनःनिर्माणमा रहेकाले भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै मागको १० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । केही आपूर्ति हुन थालेकाले अब भने वितरण सहज हुने आशा वितरकको छ ।
“हामीले ५०० प्याकेट (प्रतिप्याकेट दुई हजार ४०० एम्पुल) मगाउँछौँ, कम्पनीले जम्मा ५० प्याकेट पठाउँछ, अनि कसरी नेपालमा भ्याक्सिन सहज हुने”, राजभण्डारीले भन्नुभयो । यता सेरम इन्स्टिच्युटको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता श्रीओम ब्रदर्सका व्यवस्थापक सुवास अधिकारी भारत सरकारले मूल्य निर्धारण गरेपछि उक्त मूल्यमा घाटा लाग्ने भएकाले सेरमले उत्पादन नै नगरेको जानकारी आएको बताउनुहुन्छ ।
भारतको आन्तरिक समस्याले गर्दा अहिले शून्य दशमलव पाँच एमएलको भ्याक्सिन भने आएको छैन । अन्य ५०० एमएलको भने आइरहेको अधिकारी बताउनुहुन्छ । उहाँले यसको विकल्पका रुपमा टिडी (टिटानस डिप्थेरिया) भ्याक्सिन विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिले गर्भवती आमा र बच्चाका लागि भनेर टिडी भ्याक्सिन दिन थालेको करीब चार वर्ष भयो । त्यसयता सरकारी तवरमा टिटी खोपको आपूर्ति भएको छैन । आमा र बच्चा दुवैका लागि भनेर टिडी वितरण भइरहेको विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गतको फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापा बताउनुहुन्छ ।
सो विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा लोहनी आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत टिटीको कुनै कार्यक्रम नभएकाले सरकारी तवरबाट वितरण नभएको बताउनुहुन्छ । यसको सट्टामा टिटी भ्याक्सिन सरकारले उपलब्ध गराएको उहाँको भनाइ छ ।
Posted in जन सरोकारTagged कति लापरवाही ? छ महीनादेखि देशमा टिटी खोपको अभाव